एनआईसी एसिया बैँकद्धारा स्वास्थ्य सेवा प्रदान
रोशन तिवारी चैत्र ४ पर्वत । पर्वत जिल्लाको मोदी गाउँपालिका ६ गिज्यानमा एनआईसी एशिया बैँक नयाँपुल शाखाले निशुल्क स्वास्थ्यसेवा प्रदान गरेको छ । बैँकले शनिबार एकदिने स्वास्थ्य शिविरको आयोजना गरेर सेवा दिएको हो । शिबिरमा २ सय ५३ जनाले सुबिधा लिएको नयाँपुल शाखाका निमित्त प्रमुख टंकनाथ लामिछानेले जानकारी दिए ।
सपोर्ट नेटवर्क फाउण्डेशन नेपाल, कुश्मा अस्पताल प्रा लि. तथा स्थानिय अनमोल युवा कलव संगको सहकार्यमा उक्त शिवीर सम्पन्न गरिएको हो । बैँकले सामाजिक उत्तरदायीत्व सेवा अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा शिविर आयोजना गरेको लामिछानेले बताए ।
शिविरमा डा.हेमा छन्त्याल,डा. पाशाङ्ग छिरिङ्गलामा, दाँत रोग प्राविधिक महेश राज क्षेत्री तथा ल्याव टेक्नीसीयन चोकी थापा मगरले सेवा प्रदान गरेका थिए । उपचारको क्रममा धेरै महिलामा पाठेघर तथा उक्त रक्तचापको समस्या देखीएको डा. हेमा छन्त्यालले वताईन ।
वैक नाफामात्र भन्दापनि सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने कुरामा सँधै तत्पर रहेको बँैकका क्षेत्रिय प्रवन्धक दिपेन्द्र शर्माले बताए । बँैकले मुलुकभर १८५ शाखा, १८३ एटिएम सञ्जाल,४ एक्सटेन्सन काउन्टर, ३ शाखा रहित वैंिकङ्ग तथा पाँच हजार भन्दा वढि रेमीट्यान्स पेआउट एजेन्टहरु मार्फत जनतालाई सेवा गर्दै आएको शर्माको भनाई छ ।
कुश्मामा दलित किशोरीलाई उद्यमशिलता विकास तालिम प्रदान 752
तल्लो मोदीखोला जलबिद्युत – परिक्षण उत्पादनको तयारीमा 1232
कर्ममा विश्वास गर्ने शर्मा 1418
बैकले गाउँमै पुगेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेपछि....... 1028
गाईपालनवाट बार्षिक १० लाख आम्दानी 850
एनआईसी एसिया बैँकद्धारा स्वास्थ्य सेवा प्रदान 1242
द्वन्द्वले विस्थापित बैंक पुन सञ्चालनमा 839
अवकाश पछि माहुरीपालन 691
लघुउद्यम विकास कार्यक्रमको अभिमूखिकरण सम्पन्न 827
फलेवासमा लाइफ इन्स्योरेन्स अभिमुखीकरण 736